နားဦးတည့်ရာ နှစ်ဆယ့်ခြောက် – ဆောင်းဦးလှိုင် (မေမေ) “မွေးနေ့ဆုတောင်း” | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Music » နားဦးတည့်ရာ နှစ်ဆယ့်ခြောက် – ဆောင်းဦးလှိုင် (မေမေ) “မွေးနေ့ဆုတောင်း”
နားဦးတည့်ရာ နှစ်ဆယ့်ခြောက် – ဆောင်းဦးလှိုင် (မေမေ) “မွေးနေ့ဆုတောင်း”
Posted by မြစပဲရိုး on Jun 19, 2015 in Music | 17 comments
. ပြီးခဲ့တဲ့ နှစ် သူ့မွေးနေ့မှာ မီလင်ဒါဂိတ် ရဲ့ စကား “That is the moment when change is born” နဲ့ ဆုတောင်းခဲ့တယ်။
မြန်မာပြည် မှာလဲ ကောင်းတဲ့ အပြောင်းအလဲ တခုကို မွေးဖွားဖို့ အချိန်တန်ပါပြီ။
ဒီနှစ်မှာတော့ အားလုံးကြားပြီး နားထောင်ပြီး ဖြစ်မဲ့ သီချင်း တစ်ပုဒ် ကို ဒီ ရက် နားဦးတည့်နေခဲ့တာပါ။
“မေမေ” ဆိုတဲ့ ဆောင်းဦးလှိုင် ရဲ့ သီချင်း ပေါ့။
သူ့ကို သမ္မတ ဖြစ်စေချင်တာ ကိုယ့်ရဲ့ ကြီးမားလွန်းတဲ့ ပါစင်နယ်တောင့်တ ချက်ပါ။
Reality မှာတော့ ဗိုလ်စိတ်ပုတ်၊ ဦးစိတ်ယုတ် များ ပိတ်ဆို့ ထားဆဲမို့ သူတို့ ကို အဲဒီ နည်းနဲ့ မတိုက်ချင်တော့ပါဘူး။
ဒီတော့ “နိုင်တယ်” လို့ ပြောတာ “သမ္မတ” ဖြစ်ရမယ်လို့ မဆိုလိုချင်တော့ပါဘူး။
သူ့လက်ထဲ လုပ်ပိုင်ခွင့် အာဏာရှိဖို့ သူ့ပါတီ နိုင်မှ ဖြစ်မှာပါ လို့ဘဲ ပြောချင်ပါတယ်။
ဗိုလ်စိတ်ပုတ်၊ ဦးစိတ်ယုတ် များက သူ့လောက် ပညာလဲ မတော်၊ အရည်အချင်း လဲ မရှိ၊ စဉ်းစားဆင်ခြင်မှု မှာလဲ မစွမ်း၊ ဉာဏ်အရာမှာလဲ မမှီ အရာရာ ညံ့နေတာ သိသိကြီး မို့
ကမ္ဘာက ကိုယ့်ကို ဟားတိုက်လှောင် နေမှာ ကို မျက်နှာပြောင်တိုက် ပြီး ခုံလု နေကြ ရတာ
အဲဒီ စစ်ဗိုလ်ချုပ် တိုင်းပြည်ကို အေးဓားမြ တိုက်သူများ နေရာ မှာ ဆိုရင်ပေါ့။
အာဏာသာ လွှတ်လိုက်ရလို့ ကတော့ ခိုးထားသမျှ အထုတ်အထည် တွေ ကို မိ မှာ စိုးရိမ်နေရတဲ့ဘဝ။
သူတို့ ရဲ့ ဘဝ က သူတို့ရဲ့ လူ သမ္မတမဖြစ်မှာ ကို ရူးမတတ် ကြောက်နေရတဲ့ ဘဝ။
လက်ရှိ စည်းစိမ် တွေ ကို လွှတ်လိုက်ရမှာ ကို အသေအလဲ ပူပန်နေရတဲ့ ဘဝ။
ကိုယ်ထိပ်ပိုင်းမှာ မရှိတာ နဲ့ ပညာမရှိ ဘဲ နေရာယူ လုပ်စား နေတဲ့ သားသမီး မြေးတွေ ရဲ့ လုပ်ငန်း တွေ အတွက် စိုးရိမ် ရေမှတ် ရောက်သွားတော့မဲ့ ဘဝ။
အဆင့်ဆင့် အရိုအသေပေး ရှိခိုးဦးတင် ဖူးမျှော် ခံရမှု တွေ မရ တော့မဲ့ ကိုယ့် အကြောင်းကို သနား နေရတဲ့ ဘဝ။
. ပြောသမျှ လက်ညိုးထိုးရာ ကို အသိဉာဏ်မဲ့ လုပ်ပေးတဲ့ ခေါင်းမရှိ လူတန်းစား ရဲ့ အကြီးအကဲ အဖြစ်ကို လက်လွှတ် ရတော့မဲ့ ဘဝ။
တိုင်းပြည်ချမ်းသာပြီး သူတို့ သာမာန်လူတွေလို လူတန်းစားညီမျှ သွားမှာကို ဝန်တို နေရတဲ့ ဘဝ။
အဲဒီလို ဘဝ ပြောင်းမှာ ကို မပြောင်းရအောင် ဖြစ်နိုင်ရင် အသက်နဲ့ လဲကာကွယ်ရတော့ မဲ့ အခြေအနေ ဖြစ်နေတာ။
ဒီအတွက် ပြည်သူတွေ ဘယ်လောက်ဘဲ ထောက်ခံတဲ့ သူ ဖြစ်ပါစေ။
မျက်နှာပြောင်တိုက်ပြီး နည်းမျိုးစုံ သုံး ကာကွယ်သင့်တာပေါ့။
ဒါပေမဲ့ အံ့ဖွယ် တစ်ခုက
သူတို့လို စည်းစိမ်တွေ သုံးမကုန်အောင် မကြွယ်ဝ ပါဘဲ
သူတို့လို ရာထူးဂုဏ်ရှိန် မကြီးပါဘဲ
သူတို့လို လုပ်ငန်းတွေ ရေတွက်မရ အောင် မရှိပါဘဲ
အရိုးအရင်း လေး ကိုက်ရဖို့ သူတို့ ကို ကာကွယ်ပေးနေသူများ အတွက်ပါ။
ကိုယ့်အထက်လူကြီး တွေ ကို ခေါင်းကျိုးမတတ် ညွှတ်၊ မြေကြီးထိမတတ် ငုံ့ မနေဘဲ လူ လူချင်း မှာ ပါဝါ အာဏာ ကို ကြောက်နေစရာ မလိုဘဲ
ထမင်းဝဝ စား နေနိုင်တဲ့ အရသာမျိုး ကို ဘာလို့များ မခံစားချင်ကြလဲမသိ။
ကိုယ်မှန်ရင် ဘယ်သူ့မျက်နှာမှ ကြည့်စရာ၊
ဘယ်သူ့ကိုမှ အောက်ကျို့စရာ မလိုဘဲ
လူသား နဲ့လူသားချင်း ကြား တန်းတူ ဆက်ဆံ မှု ကို ရတဲ့ ဘဝ ရဲ့
စိတ်လွတ်လပ်ခြင်း ကို မြန်မာပြည်သူ/သား အားလုံး ကိုခံစား စေချင်ပါတယ်။
အဲဒီ အတွက် အဲဒါကို ရအောင် လုပ်ဖို့ ကို အားပေး မဲ့ ခေါင်းဆောင် လိုပါတယ်။
အဲဒီ ခေါင်းဆောင်ဟာ လက်ရှိကာလ မှာတော့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဖြစ်ပါတယ်။
သူ့ကို လောလောဆယ်မှာ ယုံထားလိုက်ကြပါ။
အာဏာရအောင် ယူပြီး သူ့လက်ထဲကို ထည့်ပေးလိုက်ကြရအောင်ပါ။
သူနိုင်မှ ကျွန်မတို့ အားလုံး လူ ကို လူ က ဖားနေရတဲ့ဘဝ၊ အောက်ကျို့နေရတဲ့ ဘဝ က လွတ်မှာပါ။
အဲဒီလို စိတ်လွတ်လပ်ပြီး ကိုယ့်ကြိုးစားမှု အသီးအပွင့် ကို ကိုယ်ပြန်စားသုံး ရမဲ့ ဘဝ ရ အောင် အတွက်
ဒီပွဲ မှာ ….
“ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်” နိုင်မှ ဖြစ်မှာပါ။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ရဲ့ ၁၉ ဇွန်လ မွေးနေ့ မွေးရက် မှသည် နောင် နှစ်ပေါင်း များစွာ တိုင်အောင်
စိတ်ချမ်းချမ်းသာသာ ကိုယ်ကျန်းကျန်းမာမာ နဲ့ ပျော်ရွှင်စွာ ချစ်သော မြန်မာပြည်မှ ပြည်သူ/သားများ ရဲ့
ထိပ်တန်း အခိုင်းခံ ဘဝ ကို ရောက်ပါစေ လို့ မြန်မာ ဂဇက်ရွာသူ/ရွာသားများ ကိုယ်စားပြု ဆုမွန်ချွေ လျှက်။
. ရေး-ဆို-တီး-ဖမ်း (ဆောင်းဦးလှိုင်)
. ဒီရထားကြီး ထွက်ချိန် မမှီဘူးဆို
. နောင်အနာဂါတ် က သိပ်မရေရာ
. အရာရာ အောက်ကျနောက်ကျ မနေရအောင်
. မေမေ နိုင်မှ ဖြစ်မယ်၊ မေမေ နိုင်မှဖြစ်မှာပါ။
. ဒါနောက်ဆုံး နဲ့ အကောင်းဆုံးအခွင့်အရေးဆို
. အောင်မြင်မှု က တို့လက်ထဲမှာ
. အမှန်တရားတို့ လင်းလက်ရှင်သန်ဖို့ဆို
. အဆိုးအကောင်း ကျိုးကြောင်းနဲ့ ခွဲခြမ်းသိရမယ်
. အမေ ဟာ အမေ ဘဲ မေတ္တာရှင် နှိုင်းစရာမမြင်
. ခလုပ်ထိချိန်မှ တို့ တမ်းတတတ်လွန်းလို့
View all posts by မြစပဲရိုး →
.နိုင်မှာပါ အမလတ်ရေ။ ဘာပြောပြော ဘာလုပ်လုပ် ဒီနေရာမှာ ဂိတ်ဆုံးတဲ့ အမလတ် ပျော်ရမှာပါ။
ကျန်းးကျန်းးမာမာနဲ့ လူထု မေတ္တာ ဆက်လက်ရရှိနိုင်ပါစေ..
လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်တွေတော်တော်ကြာ.. ဒေါ်စုအကျယ်ချုပ်ကျနေတုံးကတော့.. ဒီလိုနေ့မျိုး.. ကျုပ်တို့တွေအလုပ်များခဲ့ကြသပေါ့..။
ဆန္ဒတွေလည်းပြဖူး..။ လွတ်မြောက်ဖို့လုပ်တဲ့ရံပုံငွေပွဲတွေလည်း.. တက်ဖူး..။ စာတွေလည်းပို့ဖူး..။ ပွဲတွေလည်းလုပ်ဖူး…။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်.. မွေးနေ့မင်္ဂလာ.. မင်္ဂလာမွေးနေ့… မင်္ဂလာပြည့်စေ…။
သူ သမ္မတ မဖြစ်အောင် အသေအလဲ ကာကွယ်ကြတာကတော့
. မေမေ နိုင်မှ ဖြစ်မယ်၊ မေမေ နိုင်မှဖြစ်မှာပါ။…
…မေမေ ချစ်တဲ့ ပြည်သူားတွေအတွက် ကျန်းမာပေးပါမေမေ…
…နောက်ထပ် မွေးနေ့ပေါင်းများစွာ ပျော်ရွှင်နိုင်ပါစေ မေမေ…
သူ့အကြောင်းကို သေသေချာချာလိုက်ဖတ်ဖြစ်တာ သိပ်မကြာသေးဘူးရယ်… အဲဒီမကြာသေးတဲ့ကာလအတွင်းမှာပဲ.. ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် လို့ ခေါ်ရာကနေ အမေစု ဆိုတဲ့ စကားလုံးကို ရင်ထဲက ခေါ်ဖြစ်သွားတယ်… ကျန်းမာပါစေ အမေစု…
Happy Birthday ပါအမေ ။
( အကယ်၍သင်သည် အာဏာရှင်စနစ်ကို ထောက်ခံအားပေးသောသူ တစ်ယောက်ဆိုပါက ဤpostကို ကျော်သွားပေးပါ။ )
သားကိုယ်တိုင် ဆွဲခဲ့တဲ့ အမေ့ရဲ့ ပုံတူခဲပန်းချီကားလေးနဲ့ အမေ့ရဲ့ အသက် (၇၀)ပြည့်မွေးနေ့ကို ရည်မှန်းပြီး ကန်တော့လိုက်ပါတယ်။
အရင်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေတုန်းက ဘင်္ဂါလီအရေးအပါအဝင် အမျိုးမျိုးသောနိုင်ငံရေးပြောင်းလဲမှုတွေအပေါ်မှာ အမေ့ရဲ့အကြပ်အတည်းတွေကို ကိုယ်ချင်းမစာမိပဲ အပြစ်တင်ဝေဖန်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တာတွေအတွက်လည်း ခွင့်လွှတ်ပါလို့ သားတောင်းပန်ချင်ပါတယ်အမေရယ်။
ခုချိန်ထိလည်း အမျိုးမျိုးသော လောကဓံတရားတွေနဲ့ကြုံရတဲ့အခါတိုင်းလည်း အမေဘာသာပြန်ပေးထားတဲ့ “အကယ်၍” ဆိုတဲ့ ကဗျာလေးကိုဖတ်ပြီး သားအမြဲတမ်းအံတင်းပြီး ဖြတ်ကျော်နေရဆဲပါ။ တခါတရံများဆို လူရောစိတ်ရောအရမ်း ချုံးကျပြီး စိတ်ဓါတ်ကျတဲ့အချိန်တွေရောက်တိုင်း ဟန်းဖုန်းထဲထည့်သိမ်းထားတဲ့ အမေ့ပုံလေးတွေကြည့်ပြီး အမောဖြေ စိတ်ဓါတ်ပြန်တင်းပြီးနေခဲ့ရတာ အခါခါပါပဲအမေရယ်။
အမေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အမှတ်ရဆုံးဖြစ်ရပ် နှစ်ခုကတော့ သား ဆယ်တန်းကျောင်းသားဘဝ ဒီပဲယင်း အရေးအခင်းကြီးမဖြစ်ခင် တစ်ရက်အလို အမေမုံရွာရောက်တဲ့ညက အမေ့လက်ကို လူကြားထဲမှာ မမှီ့တမှီနဲ့ ကားအောက်ကနေ လှမ်းလက်ဆွဲလိုက်ရတာလေးဟာ အမှတ်တရအဖြစ်ဆုံးပါ။ နောက်ရက်တွေကျတော့ ဒီပဲယင်းအရေးအခင်းကြီးဖြစ်ပြီး အမေတို့ဒုက္ခအတ်ိရောက်ကြတယ်လို့ကြားရတော့ အမေချမ်းသာရာရပါစေကြောင်း အမေ့ ဒုက္ခတွေအပေါ် က်ိုယ်ချင်းစာလို့ မျက်ရည်ကျရင်းနဲ့ညတိုင်းဆုတောင်းပြီးမေတ္တာပို့ခဲ့ရတာအမောပါပဲ အမေရယ်။ နောက်ရက်အတော်ကြာတော့ အမေ့ကိုရန်ကုန်ပြန်ပို့လိုက်ပြီဆိုတဲ့ အကြောင်းကိုကြားရတော့မှ အဆိုးထဲကအကောင်း အမေ့အတွက် တော်ပါသေးတယ်ဆိုပြီး စိတ်ထဲမှာ နဲနဲတော့ သက်သာရာရခဲ့သေးတာပေါ့ အမေရယ်။နောက် အမှတ်တရ တစ်ခုကတော့ ၂၀၁၂မှာ အမေ မန္တလေးလာတော့ အမေ့ကို လက်ဆောင်ပေးဖို့ဆိုပြီး မနည်းကြိုးစားဆွဲထားတဲ့ ဒီပန်းချီကားလေးကို အမေ မဟာဂန္ဓာရုံကျောင်းတိုက်က နာယကဆရာတော်တွေကို လာဖူးတုန်း မနည်းကို ဖြစ်အောင် ဝင်ပြီး ပေခဲ့ရတဲ့အချိန်လေးပါပဲအမေ။ အဲဒီတုန်းက အမေ့အပြုံးကိုမြင်လိုက်ရတဲ့တစ်ခဏဟာ ဘာနဲ့မှမတူအောင် အေးချမ်းသွားခဲ့ရတာပါ။
အဲဒါကြောင့်လေ သား အမေ့အပေါ်မှာ စဉ်းစားညဏ်တိမ်ပြီး အထင်အမြင်လွဲမှားခဲ့တာတွေအပေါ်တကယ် ဝန်ချတောင်းပန်ပါတယ်။ ခုချိန်မှာ ကြာလာလေလေ အမေ့တန်ဖိုးကို သိလာရလေလေပါပဲ အမေ။ အမေ သမ္မတဖြစ်ရင် ကုလားနိုင်ငံဖြစ်မှာတို့ အနောက်အုပ်စုရဲ့ ကိုလိုနီဖြစ်မှာတို့ဆိုတဲ့စကားတွေဟာ အမေ့ကို ပုတ်ခတ်သူတွေရဲ့ကောလဟာလ စကားတွေပဲလို့ သားအပြည့်အဝယုံကြည်ပါတယ်အမေ။
ဒါ့ကြောင်း အမေ့ရဲ့ အသက် ၇၀ ပြည့်မွေးနေ့မှာ ကျန်းမာရွှင်လန်းစွာနဲ့ နိုင်ငံ့အကျိုးတွေဆက်ဆောင်ရွက်ရင်း လာမည့် ၂၀၁၆မှာ အမေပဲသမ္မတကြီးဖြစ်ပါစေလို့ သားဆုတောင်းပါတယ်အမေရယ်။
Taw Phayar Nong
သီပေါမင်းနဲ့ဆို တီ တော်မယ်ထင်တယ်…
တစ်ခါတစ်လေ ပြောစရာတွေ အရမ်းများနေရင် ဘာလို့မထွက်ဖြစ်တတ်တာမို့
ဦးလေး တစ်ယောက်ရဲ့ ကဗျာနဲ့ပဲ ဂါရ၀ပြုပါရစေ…
“ ၁၉ ဟာ အဖေအတွက်အထွက်ဖြစ်ပြီး
လှပပါစေ ၁၉ ရေ
၇၀ ဟာဟောသည်မြန်ပြည်ကို ပွေ့ဖက်
၇၀ မှသည် ၁၀၀ ဆီ။”
အခုလောလောဆယ်တော့ သူ့စာအုပ်ကို ၀ယ်ယူအားပေးတယ်။ဖတ်တယ်။ဖတ်ကြဖို့ တိုက်တွန်းတယ်။
အသည်းကြားက မဲတပြားက သူ့အတွက်ပဲ။
(မဲသွားမပေးနေတော့ပါဘူး၊နိုင်မှာပါပဲ ဆိုတဲ့လူကိုလည်း ဒီတမဲလေးဟာ အဆုံးအဖြတ်ဖြစ်သွားနိုင်လို့ ပေါ့ပေါ့ဆဆမနေပါနဲ့လို့ တိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။
ကိုယ်လုပ်နိုင်တာကလည်း ဘာမှရှိတာမဟုတ်တော့ …
မဲထည့်ခြင်းဖြင့် ကိုယ့်တာဝန်လေးကျေအောင် ကြိုးစားလိုက်ပါမယ်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အသက် ( ၇၀ ) ပြည့်မွေးနေ့တွင် ပြည်သူလူထုသို့ ပြောကြားသော မိန့်ခွန်း
“အသက် (၇၀)ဆိုတော့ နောင်ကျွန်မတို့ နေရတယ်ဆိုလို့ရှိရင် နှစ်(၂၀)လောက် နေရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တောင် အင်မတန်အသက်ရှည်တယ်လို့ ပြောရမှာပါ။ ဒီ နောင်နေနိုင်မယ့် နှစ်(၂၀)လောက်အတွင်းမှာ ဒီနိုင်ငံ တိုးတက်တာ၊ ဖွံ့ဖြိုးတာ ကျွန်မတို့နိုင်ငံသူ နိုင်ငံသားတွေဟာတကယ့် ကို ကမ္ဘာကနေပြီးတော့ လေးစားရမယ့်၊ တန်ဖိုးထားရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်များ ဖြစ်စေချင်ပါတယ်။ အဲဒီလို ဖြစ်တာကို ကျွန်မတို့ မြင်တွေ့သွားချင်ပါတယ်။…”
—– —– —– —–
ကျွန်မအပေါ် စေတနာ မေတ္တာထားတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်များအားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ခြင်းအားဖြင့် စ ပါရစေ။
အသက် (၇၀)ဆိုတော့ ဒီလောကထဲမှာ အနှစ်(၇၀)နီးပါးနေခဲ့ရပြီပေါ့။ အဲဒီတော့ဒီနှစ်(၇၀)အတွင်းမှာ စေတနာ မေတ္တာရဲ့တန်ဖိုးကို ကောင်းကောင်းကြီး သိခဲ့ရပါတယ်။ ကျွန်မတို့နိုင်ငံရေးလုပ်ခဲ့ရတယ်ဆိုတာလည်း သိပ်လွယ်လွယ်နဲ့ လုပ်ခဲ့ရတာ မဟုတ်ပါဘူး။
ဒါကြောင့်မို့လို့လည်း ပြည်သူတွေရဲ့ မေတ္တာ၊ ကျွန်မတို့ကို ထောက်ခံသူများရဲ့ စေတနာဟာ ကျွန်မတို့ရဲ့အင်အား ဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတာကို ငြင်းလို့မရပါဘူး။ ဒါကြောင်မို့လို့ ကျွန်မတို့ အခုဒီနိုင်ငံ ဘယ်သွားမလဲလို့ ဆက်ပြီးတော့ ကြည့်တဲ့အခါ ကျွန်မတို့ပြည်သူများဟာ ညီညီညွတ်ညွတ်နဲ့ သန့်ရှင်းတဲ့ နိုင်ငံရေးလမ်းစဉ်ကို သွားစေချင်ပါတယ်။ သန့်ရှင်းတဲ့နိုင်ငံရေးဆိုတာ ရိုးရိုးလေးပြောတာပါ။ နိုင်ငံရေးဆိုတာ နိုင်ငံရေးပါပဲ။
နိုင်ငံရေးဆိုတာ လူတွေနဲ့လုပ်နေရတဲ့အလုပ်ဆိုတော့ ခြောက်ပစ်ကင်း သဲလဲစင်လို့ ပြောလိုတာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ သန့်ရှင်းတဲ့နိုင်ငံရေးဆိုတာ နံပါတ်တစ်ကတော့ ပြည်သူလူထုကို မလှည့်ဖျားတဲ့ နိုင်ငံရေးမျိုး၊ နံပါတ် နှစ်ကတော့ ကိုယ့်ရဲ့အဖွဲ့အစည်း၊ ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းတွေ အောင်မြင်ဖို့လုပ်တဲ့အခါမှာ အခြားသူတွေကို ထိခိုက်နစ်နာအောင်လို့ မကောင်းတဲ့နည်းတွေ၊ မမှန်ကန်တဲ့နည်းတွေ၊ မတရားတဲ့နည်းတွေနဲ့ လုပ်တာကို ရှောင်ကျဉ်ဖို့ပဲ။ အဲဒီလိုလုပ်မှ ကျွန်မတို့နိုင်ငံ သန့်ရှင်းတဲ့နိုင်ငံရေး ရှိနိုင်မှာပါ။ ဒီလိုသန့်ရှင်းတဲ့နိုင်ငံရေးရှိမှ ကျွန်မတို့နိုင်ငံဟာ ရှေ့မှာဆက်ပြီးတော့ အေးအေးဆေးဆေး ငြိမ်ငြိမ်သက်သက်နဲ့ တိုးတက်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
ပြီးတော့ မွေးနေ့အတွက်ပြောတဲ့စကားတွေဟာ နိုင်ငံရေးစကားတွေချည်းပဲလားလို့ တချို့က မေးပါတယ်။ အဲဒါကတော့ ရှောင်လို့မရပါဘူး။ ကျွန်မဒီလို မွေးနေ့အတွက် ပြောရတဲ့အချိန်တွေ ရောက်လာတာကလည်း နိုင်ငံရေးကြောင့် ရောက်လာတာပါ။ ဒါကြောင့် နိုင်ငံရေးစကားပဲ ပြောရမှာပါပဲ။ ဒီနိုင်ငံဟာ အခုနှစ်ဆိုလို့ရှိရင် ကျွန်မရဲ့ ခုနစ်ဆယ်မြောက် မွေးနေ့ဖြစ်လို့ မဟုတ်ပါဘူး။ ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပမယ့်နှစ်မို့လို့ အင်မတန်မှ အရေးကြီးတဲ့အချိန်ကို ရောက်နေပါပြီ။ ဒီရွေးကောက်ပွဲမှာ မှန်မှန်ကန်ကန်ရလဒ် ထွက်ပေါ်ဖို့ဆိုတာဟာ ကျွန်မတို့ နိုင်ငံအတွက် အင်မတန်မှ အရေးကြီးပါတယ်။ အခုအချိန်မှာ အဖွဲ့အသီးသီး၊ ပုဂ္ဂိုလ်အသီးသီးက ရွေးကောက်ပွဲများမှာ အောင်မြင်ရေးအတွက် အောင်နိုင်ရေးအတွက် ကြိုးပမ်းနေကြပါတယ်။ ဒါလည်း သဘာဝကျပါတယ်။ အားလုံးဟာ ကိုယ့်ရဲ့ယုံကြည်ချက်အရ၊ ကိုယ့်ရဲ့ အဖွဲ့အစည်း၊ ကိုယ်ထောက်ခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များ နိုင်အောင်လို့ လုပ်ပေးစေချင်ကြတာချည်းပါပဲ။
ဒါပေမဲ့ လုပ်ပုံကိုင်ပုံဟာ ကျွန်မတို့နိုင်ငံရဲ့ အနာဂတ်အတွက် အင်မတန်မှ အရေးကြီးပါတယ်။ ဒီရွေးကောက်ပွဲကို ဘယ်လိုပုံစံနဲ့ ကျွန်မတို့ ကျင်းပမလဲ၊ ဒီရွေးကောက်ပွဲရဲ့ ရလဒ်တွေ ဘယ်လိုဖြစ်မလဲ၊ ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပပြီးတဲ့နောက်မှာ ကျွန်မတို့နိုင်ငံဟာ ဘယ်လိုအခြေအနေမှာ ရှိမှာလဲဆို တာတွေဟာ ဒီနှစ်အတွက် မဟုတ်ဘူး၊ နောက်နှစ်အတွက် မဟုတ်ဘူး။ နောက် နှစ်ပေါင်းများစွာအတွက်၊ ကျွန်မတို့နိုင်ငံအတွက် အဆုံးအဖြတ်ပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာဆိုလို့ရှိရင် လူတယောက်ရဲ့ အသက်နဲ့ လူတယောက်ရဲ့ ဘ၀နဲ့နှိုင်းယှဉ်မယ်ဆိုရင် ကျွန်မရဲ့ဘ၀နဲ့ နှိုင်းယှဉ်မယ်ဆိုရင် ဘ၀တခုဆိုတာ နေ့ချင်း၊ ညချင်းဖြစ်လာတာ မဟုတ်ပါဘူး။ တဖြည်းဖြည်း တစ်နှစ်ပြီး တစ်နှစ် တစ်နှစ်ပြီး တစ်နှစ် တည်ဆောက်လာရတာပါ။ ကျွန်မက ကံကောင်းထောက်မလို့ ကျွန်မကို ကောင်းကောင်း ဆုံးမမယ့် မိဘဆရာများနဲ့ ကြီးပြင်းခဲ့ရပါတယ်။
မှန်မှန်ကန် ကန်လုပ်ဖို့၊ မှန်မှန်ကန်ကန်စဉ်းစားဖို့ အားပေးတဲ့၊ သင်ပေးတဲ့ မိဘတွေ၊ ဆရာတွေနဲ့ ကြီးပြင်းခဲ့ရတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ နောက်ဆုံးတော့ ဘယ်လိုပဲ၊ ဘယ်သူကပဲသင်သင် ကိုယ်က သင်ယူမှပဲ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ပြင်နိုင်မှာပါ။ ဒီအတိုင်းပဲ ကျွန်မတို့ရဲ့ ပြည်သူပြည်သားတွေကလည်း နိုင်ငံရေးပါတီတွေက ဘယ်လိုပဲပြောပြော၊ နိုင်ငံရေးလုပ်နေတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေက ဘယ်လိုပဲပြောပြော၊ ပြင်ပကမ္ဘာက ဘယ်လိုပဲပြောပြော ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ပြင်ယူမှ ရမှာပါ။ ကျွန်မတို့တွေဟာ ကျွန်မတို့အမြင်တွေ၊ ကျွန်မတို့ဖြစ်စေချင်တာတွေ ပြောရမယ်ဆိုရင် ကျွန်မတို့ရဲ့ ဆန္ဒအိမ်မက်တွေကိုသာ တင်ပြနိုင်တာပါ။ ဒီဟာတွေကို တကယ်အကောင်အထည်ဖော်ဖို့ဆိုတာ ပြည်သူတွေပါမှ ဖြစ်မယ်။
အဓိက က ပြည်သူတွေပါပဲ။ ကျွန်မတို့နိုင်ငံဟာ အသက်ဟာဆိုလို့ရှိရင် ကျွန်မအသက်ထက် တနည်းအားဖြင့် ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင် နှစ်နှစ်ပဲ ငယ်တယ်လို့ ပြောရမှာပေါ့နော်။ သုံးနှစ်ပေါ့။ နှစ်နှစ်ခွဲ၊ သုံးနှစ်ငယ်တယ်လို့ ဆိုပါတော့။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ လွတ်လပ်ရေးရတဲ့အချိန်မှာဆိုရင် ကျွန်မအသက်က နှစ်နှစ်ခွဲ ရှိပါပြီ။ တိုင်းပြည်တစ်ပြည်ဟာ လွတ်လပ်တဲ့နိုင်ငံအဖြစ် (၆၈)နှစ်ရပ်တည်ခဲ့ပြီးပြီဆို လို့ရှိရင်တော့ ဒီတိုင်းပြည်ရဲ့ လုပ်ဆောင်မှုတွေကို သုံးသပ်နိုင်တဲ့အချိန် ရောက်လာပါပြီ။ ဒီတိုင်းပြည်ဟာ တိုးတက်ခဲ့သလား၊ ဘယ်လောက်အထိ တိုးတက်ခဲ့သလဲ။ နိုင်ငံသူ နိုင်ငံသားတွေဟာ ဘယ်လောက်အထိ ဒီလွတ်လပ်တဲ့ နိုင်ငံမှာ နေခြင်းအားဖြင့် ဘ၀တွေပိုပြီးတော့ ကောင်းလာသလဲ ဆိုတာတွေကို ကျွန်မတို့ စမ်းသပ် ဆုံးဖြတ်နိုင်တဲ့ အချိန်ရောက်လာပါပြီ။ လူတယောက် အသက်(၇၀)ပြည့်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင် ဘယ်လောက်ဘ၀မှာ တိုးတက်မှုတွေ ရှိခဲ့သလဲဆိုတာတွေကို စမ်းသပ်ပြီးတော့ ဆုံးဖြတ်နိုင်သလိုပါပဲ။
ဒီတော့ ကျွန်မတို့နိုင်ငံ ဘယ်အခြေအနေ ရောက်နေပြီလဲ၊ ဘယ်အခြေအနေကို ဆက်သွားမလဲဆိုတာဟာ ဒီနှစ်မှာ ကျွန်မတို့ ပြည်သူလူထုတွေရဲ့ လုပ်ရပ်များကနေပြီးတော့ အဆုံးအဖြတ်ပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဘာပဲလုပ်လုပ် ရေရှည်ကိုကြည့်ပြီးတော့ လုပ်ကြပါ။ ကိုယ့်ရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုပဲ ကြည့်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့ လိုအပ်ချက်တွေ၊ ကျွန်မတို့လူသားတွေရဲ့ လိုအပ်ချက်တွေ၊ ကမ္ဘာကြီးရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုပါ ကြည့်ဖို့လိုပါ တယ်။ အခုခေတ် အခုအခါမှာ ဆိုလို့ရှိရင် ဘယ်နိုင်ငံမှ ထီးတည်းကြီး နေလို့မရပါဘူး။
ဒီကမ္ဘာဟာ ပြင်ပ ကမ္ဘာကြီးနဲ့ ဆက်စပ်နေတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကျွန်မတို့ ပြည်သူ၊ ပြည်သားများဟာ ကိုယ့်ရဲ့အခြေအနေကို ကြည့်တဲ့အခါကျရင် ကမ္ဘာ့အခြေအနေ၊ ကမ္ဘာ့ရဲ့အမြင်၊ ကမ္ဘာ့ရဲ့သဘောထားတွေကိုလည်း ထည့်သွင်းပြီး တော့ စဉ်းစားရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အသက်(၇၀)…… အသက် (၇၀)ဆိုတော့ နောင်ကျွန်မတို့ နေရတယ်ဆိုလို့ရှိရင် နှစ်(၂၀)လောက် နေရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တောင် အင်မတန်အသက်ရှည်တယ်လို့ ပြောရမှာပါ။ ဒီ နောင်နေနိုင်မယ့် နှစ်(၂၀)လောက်အတွင်းမှာ ဒီနိုင်ငံ တိုးတက်တာ၊ ဖွံ့ဖြိုးတာ ကျွန်မတို့နိုင်ငံသူ နိုင်ငံသားတွေဟာတကယ့် ကို ကမ္ဘာကနေပြီးတော့ လေးစားရမယ့်၊ တန်ဖိုးထားရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်များ ဖြစ်စေချင်ပါတယ်။ အဲဒီလို ဖြစ်တာကို ကျွန်မတို့ မြင်တွေ့သွားချင်ပါတယ်။
နိုင်ငံရေးမှာဆိုလို့ရှိရင် ဘာလိုလိုနဲ့ ကျွန်မပါခဲ့တာဟာအနှစ်(၃၀)လောက် ရှိသွားပါပြီ။ နှစ်(၃၀)ဆိုတာလည်း မနည်းပါဘူး။ အဲဒီတော့ ဒီနှစ်(၃၀)အတွင်းမှာ အဓိကရခဲ့တဲ့ သင်ခန်းစာတွေ၊ ကျွန်မတို့အပေါ်မှာ မေတ္တာ၊ စေတနာထားတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေနှင့် မျှရမယ်ဆိုလို့ရှိရင် လူတိုင်း၊ လူတိုင်းဟာ ကိုယ့်နိုင်ငံအတွက် လုပ်ပေးနေနိုင်တဲ့ အခြေအနေ၊ အနေအထားရှိပါတယ်။ ကိုယ်ဟာ ဘယ်လောက်ပဲ နိမ့်သည်ဖြစ်စေ၊ မြင့်သည်ဖြစ်စေ ဒါကတော့ ကမ္ဘာ့အမြင်အရ၊ လောကီအမြင်အရပေါ့လေ။ နိမ့်တာ မြင့်တာကို ဆိုလိုတာပါ။ လူတိုင်း လူတိုင်းဟာ ကိုယ့်မှာလည်း ပေးစရာရှိတယ်ဆိုတာကို မမေ့စေချင်ပါဘူး။
ယူတာကိုပဲ ယူနိုင်မှာ ဒါကိုပဲ စဉ်းစားနေလို့ မဖြစ်ပါဘူး။ ဒါကြောင့် ကျွန်မတို့ ပြည်သူလူထုဟာ ငါတို့ဒီလောကကြီးကို ဘာပေးနိုင်သလဲဆိုတာကို လေးလေးနက်နက် စဉ်းစားစေချင်ပါတယ်။ အဲဒီလိုစဉ်းစားမှ ကိုယ့်ရဲ့တန်ဖိုးကိုလည်း သိမှာပါ။ အခု ကျွန်မ တို့အားလုံး ပြောနေတာ လူ့အခွင့်အရေး၊ လူ့အခွင့်အရေးဆိုတာ ဘာဖြစ်လို့ ကျွန်မတို့ ယုံကြည်သလဲဆိုတာ လူတိုင်း လူတိုင်းဟာ မွေးရာပါ ဂုဏ်သိက္ခာ ပါလာတယ်။ လူတိုင်း လူတိုင်းဟာ တန်ဖိုးရှိတယ်ဆိုတာကို ယုံကြည်လို့ လူ့အခွင့်အရေးကြေညာစာတမ်းကြီးဟာ ပေါ်လာတာပါ။
အဲဒီတော့ ကိုယ့်ရဲ့တန်ဖိုး၊ ကိုယ့်ရဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာကို တကယ်ပထမ စ အသိအမှတ်ပြုရမှာ ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီတော့ ကိုယ့်ရဲ့တန်ဖိုး မြင့်စေမယ့် ကိစ္စတွေကို အဓိကထားပြီးတော့လုပ်ဆောင်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင် ကျွန်မတို့နိုင်ငံရဲ့ တန်ဖိုးပါ တက် သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာ ကျွန်မကနေပြီး ဘယ်သူကမှ လူတိုင်း လူတိုင်းဟာ အပြစ်ကင်းကင်းစင်စင်နဲ့ အမှားမရှိအောင်လို့ လုပ်ရမယ်လို့ ကျွန်မဆိုလိုတာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒီလိုတကယ်ဖြစ်ဖုိ့ဆိုတာ အင်မတန်မှ ခက်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ လူတိုင်း လူတိုင်းဟာလည်း ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ပြုပြင်နိုင်တဲ့ အရည်အချင်းရှိတယ်၊ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် အချိန်မရွေး မှန်ကန်တဲ့ဘက်က နေပြီးတော့ ရပ်တည်ပေးနိုင်တဲ့ အရည်အချင်းရှိတယ်၊ ကိုယ့် ကိုယ်ကိုယ် ကိုယ့်နိုင်ငံအတွက် ဘာမဆို ဘယ်နည်းနဲ့မဆို ဘယ်နေရာမှာမဆို လုပ်ပေးနိုင်တာကို လုပ်ပေးချင် တယ်ဆိုတဲ့ စေတနာကို ပွားများအောင်လို့ နေနိုင်ပိုင်ခွင့် ရှိပါတယ်။
အဲဒါဟာ အခြားသူတွေနဲ့ မဆိုင်ပါဘူး။ လူတိုင်း လူတိုင်း တဦးချင်း တဦးချင်းရဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်၊ တဦးချင်း တဦးချင်းရဲ့ ခံစားချက်၊ တဦးချင်း တဦးချင်းရဲ့ စိတ်ထဲမှာရှိတဲ့ နိုင်ငံပေါ်မှာထားတဲ့ မေတ္တာ၊ စေတနာအပေါ်မှာပဲ မူတည်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကျွန်မအနေနဲ့ ကျွန်မတို့အပေါ်မှာ ကျွန်မအပေါ်မှာပေါ့နော်၊ ဒီနှစ် (၇၀)အတွင်း စေတနာ၊ မေတ္တာ ထားခဲ့သူတွေ အားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပြောရင်းနဲ့ ကျွန်မတို့ ပြည်သူ ပြည်သားများဟာ ကျွန်မတို့ နိုင်ငံအပေါ်၊ ကျွန်မ တို့ရဲ့ ပြည်ထောင်စုကြီးအပေါ်မှာ စေတနာ၊ မေတ္တာတွေထားပြီးတော့ အားလုံး ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် ချောချောမွေ့ မွေ့နဲ့ ညီညီညွတ်ညွတ် ဒီလောကခရီးကို သွားနိုင်ပါစေကြောင်း ကြိုးစားပေးကြပါလို့ မေတ္တာရပ်ခံရင်း နိဂုံးချုပ် ပါတယ်။
ဇွန် ၁၉၊ ၂၀၁၅ (သောကြာနေ့)
Credit – NLD CHAIRPERSON
. ပြုံး၊ ဇီကလေး၊ သူကြီးမင်း၊ ကပေါက်ကြီး၊ မအိ၊ လုံမမွန်၊ မောင်ကာကြီး၊ အစ်မဒုံ ၊ ချစ်မမ နဲ့ ဆက်ဆက် တို့ ကို အထူးဘဲ ကျေးဇူးပါ။
ကျွန်မ ဒီ သီချင်း ကို ဖဘမှာလဲ မျှထားပြီး ဆုတောင်း ထား ပါတယ်။
အမျိုး တွေ တစ်ယောက် မှ မလုပ်ဘူး။
ဖွတ် တွေ ကို အမျိုးတော်ထားရ တာ ပိုပြီး သတိထားမိတော့ တယ်။
သေချာတာက သူတို့ တွေ ဟာ ကိုယ့်ချမ်းသာရေး ကလွဲ လို့ တစ်ခြားဘာမှ မလုပ်တဲ့ သူတွေ။
သူတို့ ကိုလဲ အပြစ် တော့ ပြော စရာ မရှိပါဘူး။
သူတို့ဟာ သူတို့ ဒီ အစိုးရ လက်ထဲ ဘဝ လုံခြုံ ပြီ တွေးလဲ ဒီလို မပြောင်းဘဲ နေပေါ့။
ဒါပေမဲ့ ဒီလို မဟုတ်မှန်း သိသိကြီး ကို လက်ရှိ အခြေအနေလေး ပွန်းသွားမှာ စိုးလို့ ငြိမ်ခံ နေရတာကတော့ မတန်ပါဘူး။
ကျွန်မ လဲ သူတို့ နေရာမှာ ဆို အဲဒီလိုဘဲ ငြိမ်နေရမှာပါ။
အဲဒီလို မနေချင်လို့ လဲ သူများဆီမှာ ကျွန်ခံ နေတာပေါ့။
ဒါပေမဲ့ ဒီက ကျွန်ဘဝ က သူများ ကို ဖားနေ လက်အုပ်ချီပြ နေ မျက်နှာချို သွေး နေစရာ မလိုဘူး။
တစ်နေ့က FBမှာ သတင်းတစ်ပုဒ်ဖတ်လိုက်ရတယ်။ ဟုတ်မဟုတ်တော့ မသေချာဘူး။ မဘသဆရာတော်တွေက ရွေးကောက်ပွဲဝင် အမတ်တွေကြောင်း လိုက်ပြီး ဟောပြောမယ်တဲ့။
ဘုန်းကြီးနဲ့နိုင်ငံရေး မသက်ဆိုင်လို့ ကျွန်တော်လုံးဝမထင်ပါဘူး။ ဗုဒ္ဓဘာသာနိုင်ငံဖြစ်တာမို့ နိုင်ငံအကျိုးဟာ သံဃာတွေနဲ့ တိုက်ရိုက်သက်ဆိုပါတယ်။ သို့ပေမယ့် လိုက်ဟောပြောမယ့် ဆာတော်တွေက အရောင်ကင်းပါ့မလားလို့တော့ သံသယဖြစ်မိရဲ့
ရထားက မမှီတာမဟုတ်ပါဘူး။ ထွက်ချိန်ကို မမှန်တာပါ…. (အလုပ်သွား အလုပ်ပြန် ကိုယ်တွေ့)